Kpop Idolတို့ရဲ့ ပွဲဦးမထွက်ခင်က ဓာတ်ပုံများ – For her myanmar
Celebrity News FUN
Kpop Idolတို့ရဲ့ ပွဲဦးမထွက်ခင်က ဓာတ်ပုံများ
Posted on November 9, 2018 January 3, 2019 Author Aye Mon Kyaw	Comment(0)
ချစ်စရာလေးတွေ… <3 🤣
ကလေးဘဝက ပုံလေးတွေကို ပြန်ပြန်ကြည့်ရတာ အရသာ တစ်ခုပါ။ ငယ်ဘဝမို့ လွမ်းစရာလည်း ကောင်းသလို ပေါက်ကရ ပို့စ်တွေပေးထားတဲ့ ကလေးကလားပုံတွေမို့ ရယ်စရာလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်? ဒီနေရာမှာ K-pop idolတွေရဲ့ ပုံတွေလည်း အလားတူပါပဲ။ ဒါကြောင့် ခုတစ်ခေါက်မှာတော့ K-pop idolတွေ ပွဲဦးမထွက်ခင် ငယ်ဘဝက ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြပေးမယ်နော်။
(၁) ဒါကတော့ B.I ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ လူသိများတဲ့ iKon ရဲ့ ခေါင်းဆောင် Hanbin ပါ။ ယောင်းတို့ မထင်ထားဘူး မလား…. အိုပါးကို ဒီလိုပုံနဲ့ တွေ့လိုက်ရမယ်လို့ 😛 ဒါကြောင့် ပြောတာ ကိုယ့် အတန်းထဲက ကောင်လေးတွေကို ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုပြီး အထင်မသေးပါနဲ့ လို့။ 😜
(၂) ဟောဒီ အဆင်လေးကတော့ Got7ရဲ့ BAM BAMပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လှနေမှု၊ အသားအရေရဲ့ ကြည်လင်ဝင်းပမှုဆိုတာ ဟောဒီလို ကောက်ကြောင်း အပြည့်နဲ့ BAM BAM မှ အစစ်ပါနော် :3
(၃) ဒါကတော့ စတိတ်ပေါ်မှာ အမြဲရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ Shinee ရဲ့ ခေါင်းဆောင် Onew ငယ်စဉ်ကပေါ့။ ကိုယ်တော်ချောက ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အတော်မျက်နှာရူးပုံရတယ်။ ဆိုပေမက် ဘယ်လိုနေနေ ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော် 😀
(၄) ဒါကတော့ Shinee ရဲ့ Key လို့ လူသိများတဲ့ Kim Ki Bum ပါ။ သခွားမွှေးထဲ နားကြပ်ထည့်ပြီး အိုပါးတစ်ယောက် ဘာတွေများ တီထွင်ဖန်တီးဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့တာပါလိမ့်😂။ အက်ဒ်မင်တော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားပါပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိုပါးရဲ့  တီထွင်မှုတွေ အကောင်ထည်ပေါ်လာပါစေနော် 😛
Related Article >>> ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်နဲ့ ပရိသတ်ရှေ့မှောက် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာတဲ့ ကင်ဟွန်ဂျွန်း
(၅) ဒါကတော့ N လို့ လူသိများတဲ့ VIXXအဖွဲ့ရဲ့ Cha Hak Yeon ပါ။ Nက ငယ်ငယ်တည်းက ပန်းပန်ပြီး နန်းဆန်နေခဲ့တာပါလား… ။ ဒီလို ဒီဇိုင်းကာလာ အနေအထားကြောင့် Jelly Fish entertainmentက မျက်စိကျခဲ့တာ နေမယ်နော် 😀
(၆) ဒါကတော့ ကော်ဖီကြော်ငြာနေတဲ့ ဂျီနဂါး အိုပါးပါ။ ဆံပင်နဲ့ နှာခေါင်းကြည့်ပြီး အက်ဒ်မင်တော့ အတော်လေး ကြွေနေရပါပြီ 😂။
(၇) ဒါလေးကတော့ အားလုံးရဲ့ အချစ်တော် Blackpink ရဲ့ Lisaလေးပါ။ ခလိန်းက ငယ်ငယ်ကတည်းက စတိုင်ကျကျ လန်းခဲ့တာနော်။ အထင်တော့ မသေးစေချင်။
(၈) ဒါလေးကတော့ အင်မတန်ချိုသာတဲ့ အသံနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Hyolyn (sistar)ပါ။ သူ့လို ဆံပင်မျိုး လိုချင်ပါတယ် သုညကိုး…😂 ။ အထက်တန်းတည်းက ချစ်စရာလေးနော် ။
ယောင်းတို့ရဲ့ ငယ်ငယ်က ပုံလေးတွေလည်း ပြသွားကြပါဦး <3 <3 😉
References : aminoapps.com soompi.com
Unicode ဖြင့်လည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ခဈြစရာလေးတှေ… <3 🤣
ကလေးဘဝက ပုံလေးတှကေို ပွနျပွနျကွညျ့ရတာ အရသာ တဈခုပါ။ ငယျဘဝမို့ လှမျးစရာလညျး ကောငျးသလို ပေါကျကရ ပို့ဈတှပေေးထားတဲ့ ကလေးကလားပုံတှမေို့ ရယျစရာလညျးကောငျးတယျဟုတျ? ဒီနရောမှာ K-pop idolတှရေဲ့ ပုံတှလေညျး အလားတူပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ခုတဈခေါကျမှာတော့ K-pop idolတှေ ပှဲဦးမထှကျခငျ ငယျဘဝက ပုံလေးတှကေို ဖျောပွပေးမယျနျော။
(၁) ဒါကတော့ B.I ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ လူသိမြားတဲ့ iKon ရဲ့ ခေါငျးဆောငျ Hanbin ပါ။ ယောငျးတို့ မထငျထားဘူး မလား…. အိုပါးကို ဒီလိုပုံနဲ့ တှလေို့ကျရမယျလို့ ဒါကွောငျ့ ပွောတာ ကိုယျ့ အတနျးထဲက ကောငျလေးတှကေို ရုပျဆိုးတယျဆိုပွီး အထငျမသေးပါနဲ့ လို့။
(၂) ဟောဒီ အဆငျလေးကတော့ Got7ရဲ့ BAM BAMပါ။ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ လှနမှေု၊ အသားအရရေဲ့ ကွညျလငျဝငျးပမှုဆိုတာ ဟောဒီလို ကောကျကွောငျး အပွညျ့နဲ့ BAM BAM မှ အစဈပါနျော :3
(၃) ဒါကတော့ စတိတျပျေါမှာ အမွဲရငျ့ကကျြတညျငွိမျတဲ့ Shinee ရဲ့ ခေါငျးဆောငျ Onew ငယျစဉျကပေါ့။ ကိုယျတျောခြောက ငယျငယျတုနျးကတော့ အတျောမကျြနှာရူးပုံရတယျ။ ဆိုပမေကျ ဘယျလိုနနေေ ခဈြဖို့ကောငျးပါတယျနျော 😀
(၄) ဒါကတော့ Shinee ရဲ့ Key လို့ လူသိမြားတဲ့ Kim Ki Bum ပါ။ သခှားမှေးထဲ နားကွပျထညျ့ပွီး အိုပါးတဈယောကျ ဘာတှမြေား တီထှငျဖနျတီးဖို့ ကွိုးစားနခေဲ့တာပါလိမျ့။ အကျဒျမငျတော့ အရမျးစိတျဝငျစားသှားပါပွီ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အိုပါးရဲ့ တီထှငျမှုတှေ အကောငျထညျပျေါလာပါစနေျော
Related Article >>> ဇာတျလမျးတှဲ အသဈနဲ့ ပရိသတျရှမှေ့ောကျ ပွနျလညျ ရောကျရှိလာတဲ့ ကငျဟှနျဂြှနျး
(၅) ဒါကတော့ N လို့ လူသိမြားတဲ့ VIXXအဖှဲ့ရဲ့ Cha Hak Yeon ပါ။ Nက ငယျငယျတညျးက ပနျးပနျပွီး နနျးဆနျနခေဲ့တာပါလား… ။ ဒီလို ဒီဇိုငျးကာလာ အနအေထားကွောငျ့ Jelly Fish entertainmentက မကျြစိကခြဲ့တာ နမေယျနျော 😀
(၆) ဒါကတော့ ကျောဖီကွျောငွာနတေဲ့ ဂြီနဂါး အိုပါးပါ။ ဆံပငျနဲ့ နှာခေါငျးကွညျ့ပွီး အကျဒျမငျတော့ အတျောလေး ကွှနေရေပါပွီ ။
(၇) ဒါလေးကတော့ အားလုံးရဲ့ အခဈြတျော Blackpink ရဲ့ Lisaလေးပါ။ ခလိနျးက ငယျငယျကတညျးက စတိုငျကကြ လနျးခဲ့တာနျော။ အထငျတော့ မသေးစခေငျြ။
(၈) ဒါလေးကတော့ အငျမတနျခြိုသာတဲ့ အသံနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ Hyolyn (sistar)ပါ။ သူ့လို ဆံပငျမြိုး လိုခငျြပါတယျ သုညကိုး… ။ အထကျတနျးတညျးက ခဈြစရာလေးနျော ။
ယောငျးတို့ရဲ့ ငယျငယျက ပုံလေးတှလေညျး ပွသှားကွပါဦး <3 <3
Tagged after, Before, Celebrity news, Fun, idols, kpop, Pre debut
ယောင်းလေး မိတ်ကပ်လိမ်းတတ်တာ သေချာပြီလား?
Posted on June 19, 2018 July 25, 2018 Author Hnin Ei Oo
ဘာကြည့်နေတာလဲ မိတ်ကပ်လိမ်းချင်သလို လိမ်းနေတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို မန်းရှင်းခေါ်ပြီး ဖြေခိုင်းတော့လေ
FUN Horror Movie Reviews
လက်ရှိမှာ အအောင်မြင်ဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ ချောက်ချားစရာ Us ဇာတ်ကား
ဖြဲခြောက်နေတာမဟုတ်ဘဲ ကြည့်ရင်းနဲ့ကို ကျောချမ်းလာမယ့် ဇာတ်ကား
Career experience FUN
Posted on April 17, 2018 July 25, 2018 Author Rin
လူတိုင်းကို “ဟဲလို”နေရတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဒုက္ခလည်းမသေးသလို အချိန်ပြည့် ပြန်ဖြေနေရတဲ့ ကိုယ်တွေရဲ့“ဟဲလို” ဒုက္ခကလည်း မလွယ်ပါလားနော်….
ချိုးဖျက်ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်းယုံတမ်းစကား (၅) ခု
Fellowship ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ?